Snort 3: iyo yakavhurwa sosi IPS / IDS ine nyowani yekuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Kunonoka Iyo ndeimwe yeinonakidza kwazvo IPS / IDS software inoshandiswa mune yekuchengetedza, kuve mutungamiri wenyika mune izvi. Zvakanaka, kana iwe ukaishandisa kana kuronga kuishandisa, iwe unofanirwa kuziva kuti ine vhezheni itsva. Iyo 3.1 yekuvandudza inouya nemimwe mhinduro uye nhau kubazi iri re3.
Kunonoka 3 ikozvino kuchachengetedza system yako kudzivirira kupindirwa uye kuongororwa kwesistim system mune iri nani, inokurumidza, inoshanda zvakanyanya nzira, uye nevamwe zvinyorwa zvitsva. Nayo iwe zvakare unomisa zvese izvo zvisingadiwe traffic, kusanganisira spam, malware, uye phishing kurwisa.
Kana iwe wanga usingazive, iyo IDS (Instrusion Detection System) inzira yekutsvaga yekupinda, kuti uwane kusabvumidzwa kupinda kune system kana network. Panzvimbo iyoyo, IPS (Instrusion Prevention System) ndiyo sisitimu inodzivirira kupindira kwakadaro, kuchengetedza masisitimu kubva pakurwiswa.
Pakati pezvakakurumbira zvitsva zve Bvuta 3.1 Kune rutsigiro rwemapaketi akawanda ekugadzirisa tambo, rutsigiro rwemitemo inonamira, kugona kuona otomatiki masevhisi ekugadzirisa kusingapanike, rutsigiro rwekugovana pamwe uye tafura yehunhu, rutsigiro rwezvinhu zvinogoneka, uye yakapusa uye inogadzirisika.
Snort 3 inouyawo ne zvirinani kuyambuka-chikuva rutsigiro, nekubvumira vashandisi kuti vaimhanye munzvimbo zhinji uye masisitimu anoshanda. Iyo nyowani vhezheni inowedzerawo kuwedzeredza kuwanda kweHTTP / 2 kuongorora uye network software kugona kugona, kuwana kune anopfuura mazana maviri plugins, kugona kugadzira otomatiki zvinyorwa, kugona kumbomira uye kutangazve mirairo, kutsigira kuburitsa maCPU macultore, uye yakareba etc.
Sekureva kwevagadziri vayo mukuzivisa kwekutanga: «Patinotanga kufunga nezvazvo kuti chizvarwa chinotevera cheIPS chaizotaridzika sei, takafunga kutanga kubva pakutanga. Iyi yazvino vhezheni yeSnort ndiyo mhedzisiro yemakore anopfuura manomwe manomwe ekusimudzira uye kushanda nesimba nechikwata chedu.".
Kana iwe uchifarira shandisa Snort 3.1, iwe unotoziva kuti unogona kurodhaunura mahara kubva kune yako zviri pamutemo webhusaiti. Zvakare, kana iwe watove neiyo yapfuura vhezheni, zvirinani kuti iwe uende kune iyi nyowani vhezheni izvozvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Snort 3: yakavhurwa sosi IPS / IDS ine nyowani yekuvandudza
Valve ine akati wandei mavhidhiyo emitambo mukuvandudza ...